■ Kulula ukusebenza, kuphephile futhi kunokwethenjelwa
■ Amandla anamandla okulwa nokugqwala, impilo ende yokusebenza
•Thuthukisa izimiso zokushintshanisa ukushisa kanye nokwakhiwa kokuphathelene.
•Okubalulekile Kokwakha: Kutholakala ngo-Galvanized, SS 304, SS 316, SS 316L.
•Umsebenzi omncane, okukhipha ukushisa okukhulu
•Advanced High Technology Control System ukuletha ukusebenza High kanye Saving
Pisisekelo sokusebenza: ICompact Skid based Packaged System iletha ukusebenza okuphezulu, ukonga amandla, ukonga isikhala kumakhasimende. Uhlelo lwe-Low Ammonia Charge lusho ubungozi obuphansi, ukunakekelwa okuncane nezindleko zokusebenza eziphansi.
Ikhasimende lidinga ukuhlinzeka ngamanzi kuphela, ugesi nokunye ukuxhumana okuncane kwepayipi ukwenza uhlelo lusebenze. Uhlelo lwe-All-In-One lusho ukwehliswa kwezindleko zokuhamba kanye nezindleko eziphansi zabasebenzi zokufakwa.
Iphinde igcine uhlelo luhlanzekile, kuncishiswe ukushaywa, nokugcinwa. Ukuhlelwa kwe-skid kusho ukuguquguquka ekuxhumaneni kwamanzi / nogesi kungaba ohlangothini lwesobunxele noma lwesokudla somshini. Zonke izinkinga zesayithi ngokuya ngokufakwa, ukuthuthwa nokusingathwa kwempahla ziyasuswa.
•IMetro •Imboni Yezamakhemikhali
•Isikhungo sedatha •Isitshalo Seqhwa
Langaphambilini I-Evaporative Condenser - Counter Flow
Cold Igumbi Refrigeration System
Izinhlelo Zefriji Yezimboni
Isifriji Esikondenisi Kuhlelo Lokuqandisa